Labo qarax oo is xigxigey oo ka dhacey Jowhar – idalenews.com
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/Dhexe kaas oo lala begsaday ciidamo katirsan dowlada SOomaaliya. Qaraxan ayaa ahaa Bambooyin la sheegay in ciidamadii Shabaab ay kaga tageen xarumo ay ku lahaayeen magaalada sida uu soo sheegayo qof Jowhar kusugan.
Dadweyne u badan Dumar iyo Caruur yar yar ah ayaa la sheegay in ay ku xoomen xero ay askarta ku tababari jiren Shabaab hase ahaatee meel ka mid ah xeradaas ayaa laga maqlay qarax xoogan oo ay Shabaab ku diyaariyen.
Sidoo kale qarax kale ayaa isla goobta ka dhacay markii ay ciidamada dowlada gaareen halkii qaraxaas uu ka dhacay oo ahayd xaafada Horseed.Waxaa jira qasaaro ka dhashay qaraxyadan oo inta badan soo gaaray caruur da’yar iyo ciidamo katirsan dowlada oo iyagana qaraxa lala beegsaday.
Howlgallo balaaran ayaa ka soconaya magaalada, waxaana degan xaalada iyadoona shacabka ay bilaabeen in ay banaanka u soo baxaan si ay u arkaan isbedelka magaaladooda ay saakey ku waabariisatey
Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed oo la filaayo in lagu dhawaaqo horaanta sanadka Cusub 2013